नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): पुरुषले कानमा मुन्द्री लगाउन र लामो कपाल पाल्न, महिलाले समाजलाई उत्तेजित पार्नेखालका कपडा लगाउन थाले पछी !
पुरुषले कानमा मुन्द्री लगाउन र लामो कपाल पाल्न, महिलाले समाजलाई उत्तेजित पार्नेखालका कपडा लगाउन थाले पछी !
ताप्लेजुङका पुरुषले कानमा मुन्द्री लगाउन र लामो कपाल पाल्न नपाउने भएका छन्। यसैगरी महिलाले समाजलाई उत्तेजित पार्नेखालका कपडा लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि प्रहरीले गर्न लागेको छ। यस्ता कार्यले समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढाउने भन्दै ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुखले त्यसविरुद्ध अभियान सुरु गरेका छन्। काठमाडौंबाट सरुवा भएर आएको महिना दिन नपुग्दै जिल्लाका प्रहरी नायव उपरीक्षक केदार ढकालले यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित बनाउने अभियान सुरु गरेका हुन्। समाजमा यस्ता कार्यले सर्वसाधारणलाई डर र त्रासमा राख्‍ने तथा लगाउनेलाई मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच बढेर जाने भएकाले यस्तो कार्य आवश्यक भएको ढकालले बताए। उनका अनुसार मुन्द्री लगाउने, लामो कपाल पाल्ने, पेन्ट र सर्टलाई स्वरुप बिगारेर अर्कै बनाउने जस्ता कार्य गरेर समाजमा अस्वाभाविक त्रास फैलाउन थालेपछि सर्वदलीय बैठकमै यो एजेण्डा उठाएर उनले अभियान सुरु गरेका हुन। ढकालले आफूहरुले यस्तारुपमा भेटिएकालाई पहिलो पटक कार्य सुधार्न भन्ने र नमाने अर्को पटक अरु सर्वसाधारणझैं बनाइदिने बताए। ढकालले महिलाले पनि समाजलाई
उत्तेजित बनाउनेखालका कपडा लाउनाले समाजको हेराई राम्रो नहुने भएकाले महिला प्रहरीमार्फत् पहिरनको व्यवहार सुधार्न सुझाउँदै आएको बताए। ढकालले समाजको वास्तविकताभन्दा तत्कालै नयाँ फड्कोमा पस्न नसकिने भन्दै समाजलाई उत्तेजित बनाउने कार्य रोक्न आफूले यस्तो कदम चालेको दाबी गरे।